Ihe Mmekọrịta nke Ọha nke Anyị Mụtara Mgbe Anyị Na-akpụ Akụkọ Anyị | Martech Zone
Wednesday, June 1, 2016 Wednesday, June 1, 2016 Douglas Karr
Afọ ole na ole gara aga, edere m akwụkwọ na igwe maka esi dee ụda site na echiche m dika akwukwo. Otu ihe ikpeazụ m kwuru n’isiokwu ahụ bụ na ọ ga-adịrị ndị na-ege anyị ntị mkpa. Aga m aga n'ihu ma kwuo, na mkpọtụ na mkpọtụ niile dị ebe ahụ, na enwere nnukwu ohere maka ezigbo PR iji wepu ahihia ma banye na mbipụta anyị. Niile ị chọrọ bụ akụkọ.
Kwa ụtụtụ, m na-emeghe igbe ozi m, ma e nwee ebe a na-azụ robo iri na abụọ. Fọdụ bụ naanị ngwa ọrụ akpaaka PR na-akụ m ọtụtụ oge. Fọdụ bụ nanị a idetuo na mado pịa mbipụta na-enweghị nkọwa na ihe kpatara eji akụ m ma ọ bụ ihe kpatara ndị na-ege m ntị ga-eji anụ akụkọ ahụ.
Naanị otu ụzọ ma ọ bụ abụọ n’ime ha nwere akụkọ ma ọlị. N'ezie, m na-agakarị lelee ụlọ ọrụ ndị m gụrụ gbasara akụkọ mgbasa ozi wee zaa onye PR ahụ nke nwere ụda nke m banyere otu ụlọ ọrụ ha si enyere Kasị njọ, ndị otu PR adịkarịghị njikere ịzaghachi, ha na-ewe ụbọchị iji nweta nseta ihuenyo ole na ole, nyocha, na nyocha ngwaahịa m. Olee otú nke ahụ ga-esi kwe omume?
Ka anyị Gbanwee Ọnọdụ
Anyị nwere akụkọ ịma ọkwa!
Anyị nwere otu egwuregwu mmekọrịta ọhaneze mara mma, Dittoe PR. Enwere ụfọdụ ntamu na Indianapolis na ọ bụrụ na ịnọghị na mmadụ ole na ole ahọpụtara, ị nwere ike ịgaghị ime akụkọ mpaghara. O siri ike iso ndị ụlọ ọrụ na-azụ ahịa dị elu ma ọ bụ na-etinye ọtụtụ nde dollar mpi na ibe azụmaahịa anyị.
N'ime afọ gara aga, anyị tinyere ego na Podcast studio anyị wuru n’ime obodo Indianapolis. Anyị na a na-ahụ oké ibu na ndị mmekọ anyị na Edge nke Web Radio ma anyị na-anya ime mpụga Indy ime ihe ngosi. Anyị chọrọ ebe dị mma ole na ole site na etiti obodo iji weta ndị ọbịa anyị.
Iwuru ulo oru a. N'ezie, otu n'ime ndị ọbịa mbụ anyị gara bụ ụlọ ọrụ Mayor nke Indianapolis! Anyị chere na nke a bụ akụkọ ịtụnanya:
We nyekwara ma wuo ihe eji eme pọdkastị na obodo Indianapolis.
We wuru studio nke izizi udi noo na obodo Indianapolis.
We enweworị ọfịs Onye isi obodo na pọdkastị anyị na studio ọhụrụ ahụ.
Dittoe PR chighachiri azụ mana anyị kwagidere ha na nke a bụ akụkọ dị oke mma maka ịtụkọta mgbasa ozi mpaghara. Dittoe mara ihe na-esote… Enwere ntụpọ atọ na ọkwa dị n'elu… enwere m olileanya na ị ga-ahụ ha:
Ọdịdị anyị bụ ihe gbasara anyị. Chọpụta, e nwere tangent na ịbụ ogbe ndịda ma ọ ka dị ihe niile gbasara anyị. Ndị otu ahụ nọ na Dittoe lọghachiri wee gwa anyị na nke a bụ nsogbu. Ha kwuru na ha chọrọ akụkọ nke kariri anyị ma soro anyị kwurịta ihe nke ahụ bụ.
Ọ na-anọdụ ala n'ihu ihu anyị n'oge niile… Podcasting. Podcasting na-agbawa na ewu ewu mgbe ịbụ a pụtara niche media ruo ọtụtụ afọ. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana anyị abụghị ndị mbụ na mpaghara Indianapolis.
Darrin Snider bụ ọkachamara ọkachamara na Podcast na mpaghara nwere otu ịtụnanya obodo music Podcast. Brad Shoemaker wuru nke mbụ raara onwe ya nye studio na Indianapolis - a mara mma studio maka ma video na ọdịyo. Ọ na-aga n'ihu ịjụ anyị gbasara ọganihu anyị. Bill Caskey si Advanced ere Podcast enwewo ihe ịga nke ọma nke na a chịkọtara ya maka syndication. Ma iri na abuo ma ọ bụ karịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ nọ na-etinye ego na Podcasting, gụnyere Ndepụta Angie.
Ugbu a, nke ahụ bụ akụkọ, nri? Kama nke anyị, anyị, anyị, akụkọ a bụ usoro mgbasa ozi na-eme na mpaghara ahụ! Dittoe dere akụkọ ahụ ma were ya ozugbo. Ọbụghị naanị na e buliri ya, o ji ihu ọchị m, mee ihu ihu ihu!
Fọdụ nwere ike ịrụ ụka na anyị jiri isiokwu ahụ kerịta ihe ngosi. Ọfọn, duh! Ikesa ihe nlere anya n'ụzọ ọ bụla belatara akụkọ ụlọ ọrụ anyị na ikike anyị nwere na oghere ahụ? Mba, nke ozo, o mebere anyi dika ndi okacha amara na mpaghara anyi.
Akụkọ ahụ kwesịrị ibu karịa gị
Dittoe PR kụziiri anyị ihe mmụta dị otú ahụ bara uru. Dị ka onye nkwusa, ihere ga-eme m na anaghị m a theụ ọgwụ m na-enye ndị ọhaneze na-atụ m ụjọ. Akụkọ a abụghị maka gị ma ọ bụ mụ onwe m, ọ bụ maka mmetụta ndị na-ege ntị. Mgbe ị nwere ike nka a akụkọ na-ekwu banyere otú ị na-agbanwe akwụkwọ 'kiriri' ndụ, ọrụ, akụnụba, na-egwu, wdg… ị na-aga na-ere akụkọ. Ọ bụghị banyere gị.
Tags: brad akpụkpọ ụkwụokike zombie studiodarrin snyderdittoe prọnụ nke redio weebụihu igwe redioibjIndianapolis Podcasting studioindyintuneAhịa PodcastpitchPodcast studioprpr nkwụsịmmekọrịta ọhaneze
8 Elements nke Irè Trade Show Booth Design